Mbudzi Simulator, yemahara kwenguva shoma | IPhone nhau
Mbudzi Simulator, yemahara kwenguva shoma
Mumwe wemitambo wakanyanya kukwezva kutariswa nekuda kweiyo yekutanga iyo yakasvika kuApp Store mumakore achangopfuura iyi Goat Simulator, iyo, sekutaurwa kwazvinoitwa, ndiyo simulator yatinopinda muchinzvimbo chembudzi, mbudzi iyo isu vanofanirwa kufamba nemunharaunda kuitira kuti vaite zvinoitwa nembudzi: kuparadza zvese zviri munzira. Iyo michina yemutambo, inova inosemesa kunyanya kana tikabatika mune chimwe chikamu chemutambo, asi kazhinji kana tichida regedza kupisa zvishoma uye pedza chinguva uchinzwisisa mutambo unozadzisa basa rawo nenzira inopfuura inogutsa.
Sezvo isu tichigona kuverenga mune tsananguro yemutambo «Mbudzi Simulator yave kuda kukonzera kuparadza kwakawanda sezvaunogona nekuva mbudzi. Yakafananidzwa nemutambo wekare-chikoro skating mutambo, chete panzvimbo pekuve skater, iwe uri mbudzi, uye pachinzvimbo chekuita zvinyengeri, unoremedza zvinhu kumusoro. "Kana zvasvika pambudzi, kunyangwe denga harisi iro muganho, sezvo uchikwanisa kupfuura napo nekuda kwekumwe kupunzika uye kupwanya mutambo."
Mugadziri wemutambo inodaro Mbudzi Simulator ibenzi mutambo, zvazviri, uye kutaura chokwadi tinokurudzira kuisa mari yedu mune mumwe mutambo, asi inowanikwa kuti utorwe mahara kwenguva yakati rebei, tinogona kutora mukana weichi chipo kuti tione kupusa uye kusanzwisisika kwemutambo. kuti tinotamba chinzvimbo chinoparadza chembudzi yemakomo kusvika kumax.
Mbudzi Simulator Zvimiro
Unogona kuva mbudzi
Tora mapoinzi ekuparadza zvinhu: ratidzira kushamwari dzako kuti iwe uri alpha mbudzi
MAMIRIYONI EBUGUGI! Isu tinongobvisa mabugs ayo anoita kuti mutambo upunzike; zvimwe zvese zvinonakidza uye isu tichazvisiya
Iyo fizikiki inokonzeresa kusanzwisisika uye kusanzwisisika kufamba nguva dzese
Kunyanya, tarisa pamutsipa wembudzi uya
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » IPhone mitambo » Mbudzi Simulator, yemahara kwenguva shoma
AirPod yakarova Apple Store svondo rinouya